I-Seychelles yoKhenketho iqalisa iiNdibano zoThengiso zoNyaka eziphakathi enyakeni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles yoKhenketho iqalisa iiNdibano zoThengiso zoNyaka eziphakathi enyakeni
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukubonisana ngeNtengiso yaseSeychelles
I-Seychelles yoKhenketho iphehlelele uphononongo lwayo lwaphakathi enyakeni lwama-2021 kunye nothethathethwano lokuthengisa kunye namaqabane ezokhenketho lwengingqi ngoLwesibini, nge-27 kaJulayi, ukuphonononga ukusebenza kwendawo ekuyiwa kuyo ukuza kuthi ga ngoku kwaye baxoxe kwaye bahlengahlengise izicwangciso zenxalenye yesibini yonyaka.
Olu thethwano luqale ngentetho emfutshane nguMphathiswa Wezangaphandle nezoKhenketho, uMmeli uSylvestre Radegonde.
USosiba oyiNtloko wezoKhenketho, uNkosazana Sherin Francis, wenze intetho-qhinga yesebe.
ISebe lezoKhenketho lisebenza ngokubambisana nabachaphazelekayo kwezokhenketho kunye nemibutho karhulumente ukuphonononga iimveliso ezinikezelwa eSeychelles kunye nokubonelela ngeenkonzo ezingcono kubakhenkethi balo.
I-Seychelles kutshanje irekhode ezona ndwendwe ziphezulu zeveki ukusukela oko kwaqala ubhubhane ngo-Matshi 2021, kunye nabakhenkethi abangama-5,367 kwiVeki yama-29 ka-2021, okanye ngama-22% nje kuphela kwangeveki efanayo ngowama-2019.
Ibibanjelwe kwiqonga elibonakalayo i-ZOOM, thethwano, oluza kuqhutywa kwezi veki zimbini zizayo, luqale ngentetho emfutshane ngu-Mphathiswa Wezangaphandle nezoKhenketho, u-Ambassador Sylvestre Radegonde, kubachaphazelekayo kushishino. eSeychelles kunye nabasebenzi beSebe lezoKhenketho kwihlabathi liphela. Oku kwalandelwa kukunikezelwa kwesicwangciso-qhinga sesebe nguNobhala oyiNtloko wezoKhenketho (i-PS), uNksk Sherin Francis.
Ethetha namaqabane eshishini, uMphathiswa uRadegonde uqaqambise ukuba ngaphandle kwesibetho esiqhubekayo, esihlisa isantya sokuhamba kwihlabathi liphela, ishishini lokhenketho lwasekhaya lijamelene nemiceli mngeni emininzi, ethintela ukukhula kweshishini. UMphathiswa unike isiqinisekiso sokuba iSebe lezoKhenketho lisebenza ngokubambisana nabachaphazelekayo kwezokhenketho kunye nemibutho eyahlukeneyo karhulumente ukuphonononga iimveliso ezinikezelwa eSeychelles kunye nokunikezela ngeenkonzo ezingcono kubakhenkethi balo.
Umphathiswa u-Radegonde uphawule Ukhuthazwe kakhulu kukwanda okuzinzileyo kwamanani okufika kwabatyeleli, kunye nolwabiwo olulinganayo lweendwendwe kubukhulu bamaziko nakwiziqithi ezahlukeneyo.
Kwinkcazo-ntetho yakhe, i-PS Francis inikezele ngesishwankathelo semo yangoku yeshishini lokhenketho lwasekhaya, igqabaza ngefuthe lokungaqiniseki kwehlabathi kuqoqosho lwaseSeychelles kananjalo nokubonelela ngesishwankathelo sokuqikelela ngokuchasene namanani afikayo ngoku kunye nokubhukisha phambili okubanjelweyo , ezibonisa ukukhula okulindelweyo kwiikota ezimbini ezizayo.